သင့်ဆံပင်ကို သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ detox လုပ်နည်း (၆) နည်း - Lifestyle Myanmar
Detox လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ မျက်နှာ ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲ Detox (အဆိပ်ထုတ်ခြင်း) လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ Chemical တွေပါတဲ့ ဆံပင်ဆိုးဆေးတွေ၊ ကောက်ဆေး၊ ဖြောင့်ဆေးတွေကြောင့် ဆံသားခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေပြီဆို သင့်ဆံသားတွေထဲက chemical အကြွင်းအကျန်တွေနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို detox လုပ်ပြီးဖယ်ရှားပစ်ရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆိပ်ထုတ်သလိုပဲ ဆံပင်ကို ပုံမှန်အဆိပ်ထုတ်ခြင်းက ဆံပင်နှင့် ဦးရေပြားကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Hair detox ထဲမှာ ရယ်ဒီမိတ် detox shampoo (သို့) သဘာဝကုစားမှုတွေနဲ့ သင့်ဆံပင်ကို နက်ရှိုင်းစွာ သန့်စင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆံပင်အဆိပ်ထုတ်တာက ဖုန်၊ အညစ်အကြေးနှင့် အလှကုန်စုပုံနေခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဒီအရိအရွဲအလွှာကို မဖယ်ရှားနိုင်ရင် ကိုယ်က Hair care ကို ဘယ်လောက်ပဲ စျေးကြီးတာ သုံးပါစေ၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေ မရပါဘူး။ ဆံပင်အဆိပ်ထုတ်ခြင်းက ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြားကို hair care treatments တွေအတွက် အဆင့်သင်ဖြစ်စေပါတယ်။
သင့်ဆံပင်ကို ဘာ့ကြောင့် Detox လုပ်သင့်သလဲ?
အပေါ်မှာပြောထားသလိုပါပဲ hair care products တွေ အသုံးပြုခြင်းက သင့်ဆံပင်ထဲမှာ ဖုန်နှင့်အဆီတွေကို စုပုံလာစေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းက ဆံပင်ပါးခြင်းနှင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သင့်ဆံပင်ကို အနံ့နံစေပါတယ်။ ဆံပင်ကို အဆိပ်ထုတ်ခြင်းက ဒီဆိုးကျိုးတွေကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဦးရေပြားကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့် ယားယံခြင်းနှင့် ဘောက်တွေကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်
အဆီတွေ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေ၊ ပျော့ဆေးတွေနှင့် ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးကဲ့သို့သော hair care products တွေရဲ့ စုပ်ယူမှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်
hair care products/treatments ကနေ အာဟာရဓါတ်တွေရဲ့ ထိရောက်စွာ စုပ်ယူမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသဖြင့် အရိအရွဲ၊ အဆိပ်စုပုံမှုကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ဆံသားကျန်းမာသန်စွမ်းမှုကို တိုးမြှင့်စေနိုင်ပါတယ်။
Hair detox ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ? အောက်ပါနည်းလမ်းတွေက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ခွက်တစ်ဝက်နှင့် ရေပူ သုံးခွက်လိုအပ်ပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ရေပူထဲမှာ ထည့်မွှေပါ။ သင့်ဆံပင်ကို လုံးဝစိုစွတ်တဲ့အထိ ရေစွတ်ပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့် ရေရောထားတာကို သင့်ဆံပင်အနှံ့ လောင်းပေးပါ။ ဦးရေပြားကို မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ နှိပ်ပေးပြီးနောက် ရေဆေးချပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက အဆီတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဘောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် လုပ်ပါ။ ဒီကုထုံးကို မစမ်းမီ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက တစ်ချို့တွေမှာ ဦးရေပြားယားယံခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
ပန်းသီးရှာလကာရည် ခွက်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံနှင့် ရေ၂ခွက် လိုအပ်ပါတယ်။ ပန်းသီးရှာလကာရည်ကို ရေနှစ်ခွက်နဲ့ရောပါ။ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် ပုံမှန်အတိုင်းလျှော်ပေးပါ။ ပြီးမှ ဆံပင်တစ်လျှောက်လုံးကို ရောထားတဲ့ ပန်းသီးရှာလကာရည်နဲ့ လောင်းချပါ၊ ရေထပ်မဆေးပါနဲ့။ ပန်းသီးရှာလကာရည်က cleanser အပျော့စား ဖြစ်ပါတယ်၊ ၎င်းက ဆံပင်ကို သန့်စင်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၃။ ပင်လယ်ဆား+ ခေါင်းလျှော်ရည်
ပင်လယ်ဆားကြမ်း ၂ဆနှင့် ခေါင်းလျှော်ရည် ၁ဆလိုအပ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ဆား clarifying shampoo ပြုလုပ်ဖို့ ပင်လယ်ဆားနှင့် ခေါင်းလျော်ရည်ကို ရောပါ။ ကောင်းစွာ အမြုပ်ထတဲ့အထိ သင့်ဆံပင်မှာ ပွတ်ပေးပါ။ ရေအေးအေးနဲ့ လျှော်ပါ။ ပင်လယ်ဆားက ထိရောက်တဲ့ exfoliant တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက အရေပြားအစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ အရေပြားဆဲလ်သေတွေကို လျှော့ချပေးပြီး ဆံပင်ကို သန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်လောက်သာ အသုံးပြပါ။
ပျားရည်ကြမ်း ၁ဇွန်း၊ ရေသန့်၃ဇွန်းလိုအပ်ပါတယ်။ ရေထဲကို ပျားရည်ထည့်ပြီး နှံ့စပ်အောင်မွှေပါ။ ဆံပင်ကို ရေစွတ်ပြီး ဦးရေပြားကနေ ဆံပင်အဖျားလေးတွေအထိ ပျားရည်နဲ့ ပွတ်ပေးပါ။ ရေနွေးနွေး(သို့) ရေအေးအေးနဲ့ ပြန်လျှော်ပေးပါ။ ထို့အပြင် ပန်းသီးရှာလကာရည်နဲ့ ဆေးချခြင်းအပြင် ပျားရည်ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ပါ လျှော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပျားရည်က ဆံသားကို နူးညံ့ချောမွေ့စေပြီး ဆံသားကို နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းစေပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ၁ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
၅။ သခွားသီးနှင့် သံပုရာ
သံပုရာသီး အကြီး ၁လုံးနှင့် သခွားသီး အလတ်စား ၁လုံးလိုအပ်ပါတယ်။ သခွားသီးနှင့် သံပုရာသီးကို အခွံခွာပြီး အစိတ်သေးသေးလေးတွေ စိတ်ပါ။ သင်နှစ်သက်ရာ essential oil နှင့်အတူ Blend လုပ်ပါ။ ပုံမှန်ခေါင်းလျှော်ရည်အတိုင်း သုံးလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း ဆေးကြောပေးပါ။ သံပုရာသီးက citric acid အရင်းအမြစ် ကြွယ်ဝပါတယ်။ Citric acid က သင့်ဦးရေပြားကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေနို်ငပါတယ်။ သခွားသီးက သင့်ဦးရေပြားကို အေးမြစေပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
၆။ သစ်ကြံပိုး Detox ပေါင်းဆေး
သစ်ကြံပိုးခေါက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းနှင့် သံလွန်ဆီ ၂ဇွန်း လိုအပ်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ပန်းကန်လုံးထဲပေါင်းထည့်ပြီး ခပ်ပျစ်ပျစ်ရတဲ့အထိ ရောမွှေပါ။ ဦးရေပြားပေါ်မှာ ပွတ်ပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ မိနစ် ၂၀လောက်နေရင် ဆံပင်ကို ပြန်လျှော်ပါ။ သစ်ကြံပိုးခေါက်မှာ antifungal ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိပါတယ်။ ၎င်းက ဘောက်ဖြစ်စေတဲ့ မှိုရှင်သန်မှုကို ထိရောက်စွာ နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်သုံးပါ။
သင့်ဆံပင်ကို အဆိပ်ထုတ်ဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ အစားအစာများ
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆိပ်အတောက်ကင်းစင်စေခြင်းက သင့်ဆံပင်ကျန်းမာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အထောက်အထားများအရ အောက်ပါအစားအစာတွေက အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ သခွားသီး၊ ဂျင်း၊ သံပုယိုသီး၊ ဖရဲသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ Curry leaves၊ ထောပတ်သီး၊ အရွက်များ၊ ပရိုတိန်းကြွယ်ဝသော အစားအစာများ စားခြင်းအပြင် ရေများများသောက်ပေးခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓါတ်လယ်ဗယ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အဆိပ်အတောက်ကင်းစင်စေပါတယ်။
မီးတွေဖွင့်အိပ်ရင် သင့်အတွက် ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
ဒီနေ့မှာတော့ မီးဖွင့်ပြီး အိပ်ခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းကို မျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ရဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ညဘက်မှာ အလင်းတုတွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်းက မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်တတ်စေပါတယ်။ ကြွက်အမတွေပေါ်မှာ ဒီစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ညဘက်မှာ အလင်းရောင်နဲ့...
ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေလက်ထပ်ကတည်းက အသုံးပြုခဲ့သော သင့်ဆံနွယ်တွေကို အားဖြည့်ပေးနိုင်သော အစားအသောက်ထုတ်ကုန် (၁၀) မျိုး
လူတွေဟာ ရှေးပဝေသဏီကတည်းကပင် သဘာဝထုတ်ကုန်တွေကို အလှအပဆိုင်ရာကုထုံးတွေအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ရှေးခေတ်အိန္ဒိယမှာဆိုရင် ဆံပင်တွေကို အဆီထည့်ခြင်းဖြင့် ဆံပင်တွေကိုသန်မာအားကောင်းသောနည်းလမ်းတွေကို ဒီကနေ့အထိအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံသားတွေကို အားဖြည့်ပေးပြီး သန်စွမ်းစေပြီး ပိုထူလာပြီး ပိုနူးညံ့စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆံသားတွေကို ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေစေဖို့ တစ်ခြားအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ့်...
လူတွေဟာ ၁၉၂၀ အစောပိုင်းမှာတည်းက မိတ်ကပ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေးခေတ်က မိတ်ကပ်တွေကို အခမ်းအနားတွေမှာသာ သုံးခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနေ့မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း မိတ်ကပ်လိမ်းနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်လောကမှာ revolution ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့ပြီး အရင်တုန်းကထက် ပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် အလှအပကုမ္ပဏီအများစုက ဘယ်အလှကုန်ပစ္စည်းမဆို...